“Muwaaddin Ha Ciidayn Citiraafkeena!” – Siyaasi Maxamed A. Barkhad |
“Muwaaddin Ha Ciidayn Citiraafkeena!” – Siyaasi Maxamed A. Barkhad
Maxamed Axmed Barkhad oo ah xisaabiye sare (senior account) iyo siyaasi caan ka ah wadanka Sweden ayaa waxa uu maanta na soo gaadhsiiyey qoraal kooban oo uu kaga hadlayo heshiiska dawladda iyo DP World ay wada gaadheen. Qoraalkaas kooban waxa uu u dhignaa sidan: –
“Maalgashiga DP World = Aqoonsiga Somaliland – Muwaaddin Ha Ciidayn Citiraafkeena!
Faa´iidooyinka maalgashiga shirkadda DP World uu innoo yeelan doono uma baahni in aan halkan ku sharxo maadaama qorshuhu yahay in Itoobiya ay kala soo degto 30-50% waxyaalaha ay la soo degto ama dhoofiso. Anigu waxaban ka baqayaa in Berbera laga waayo wax ka shaqeeya dekedda oo dadkeeduba ay ku fillaan waayaan.
Dulucda qoraalkayga haddaan u dhaadhaco. Adduunka waxa u taliya 50 dawladood oo hodan ah iyo 50 shirkadood oo waawayn. Imaaraadka iyo DP World labaduba waxay ku jiraan 100-kaa ka taliya adduunka. Sidaa daraadeed haddii aynu ku guulaysanno maalgashiga shirkaddan waxan aaminsanahay in Citiraafka Somaliland uu aad u soo dhawaaday. Sababtuna waxa weeye, shirkaddani marka ay dalka geliso boqolaal milyan oo dollar waxa ay ku qasban tahay in ay ilaaliso danaha dalka ay maaligashatay. Sidaad la socotaan siyaasiyiinta reer Soomaaliya (uma jeedo shacabka soomaaliyeed) in badan oo ka mid ah ayaan marnaba ogolayn in dalkeenu helo maalgashi intaa le´eg sidaa daraadeed cadaadis badan ayay saarayaan shirkaddan. Waxa dhici karta in ay xataa ku xidhaan in ay iyagana lacag siiso immika iyo mustaqbalkaba maadaama ay iska dhigayaan in ay iyagu Soomaaliya oo dhan matalaan. Marka shirkaddu maalgashiga fuliso haddii siyaasiyiinta reer Soomaaliya ay shirkadda ku cadaadiyaan in ay wax ka siiso macaashka marasaddeena Berbera waxa DP world qasab ku noqon doonta in ay citiraaf u raadiso Somaliland, taasoo ay si dhib yar ugu guulaysan karto maadaama adduunka ay maamulaan 50 shirkadood iyo 50 dawladood.
Sidaa daraadeed reer Somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan reer Berbera waxan kula talinayaa in aynaan iska ciidayn citiraafka waayo haddii aan maanta ku buuqno shirkaddan oo ay innagala noqoto maalgashigan, waxa hubaal ah in cid dambe oo innagu soo dhiirata la waayi doono. Ogow DP World in ay tagi karto Boosaaso, Muqdisho ama Kismaayo haddii aynu joojin wayno in aynu wax kasta oo la qabanayo ku mucaaridno. ”Muwaaddin, ha innaga ciidayn citiraafkeena”.
Khadar Axmed Barkhad
Senior accountant & local politician